China China Factory Elungiselelweyo zu fiberglass nothango for Construction mveliso kunye nabenzi | IBonai
Iglasi yefayibha eqinisiweyo yeplastiki (i-FRP) kunye neglasi yefayibha eqinisiweyo yeplastiki, luhlobo lweglasi yefayibha eqinisiweyo, i-resin ye-polyester engafakwanga njenge-matrix, ngokuqhubekeka okukhethekileyo kwaye lube luhlobo lwezinto zepleyiti, zinendawo eninzi engenanto ye-FRP esetyenziswa njengesixhobo semathiriyeli, esetyenziselwa umgangatho wobume bokubola, ikhava yomsele, iqonga, inqanawa yenqanawa, isinyuko, iicatwalks, njlnjl. nokumelana kunye nokudangatye kwelangatye, ukugquma okungagungqiyo, imibala eqaqambileyo, iintlobo ngeentlobo zeefom zezinye izinto.
Ukugqitywa kwesityalo seMichiza kunye nesinyithi, Ubunjineli bokwakha, ukugcwala kunye nokuhamba, Ubunjineli bePetrochemical, uphando lwaselwandle, ubunjineli bamanzi, Ukutya neziselo izityalo, Ushicilelo lwempahla eyolukiweyo kunye nedayi kunye nomzi mveliso we-elektroniki
Umgangatho wokutyibilika, ukunyathela isiteji, ibhulorho yeenyawo Iqonga lokusebenza, isiciko somsele, Ukhuseleko nocingo, handrail, Rig yeoyile engaselunxwemeni, indawo yokugcina iinqanawa, indawo yokuthumela iimpahla, isilingi, Ileli yereamp, istaffold, indlela yendlela kaloliwe, Igridi yokuhombisa, iigridi zamachibi ezenziwe ngumntu, Ukungahambisi kunye nokungahambi ngombane
Ukulwa nomlilo, Anti-umhlwa kunye anti-ukwaluphala, Umtyibilizi, Ukukhanya kodwa amandla alayishwe phezulu, Ubomi benkonzo ende kunye nokugcinwa simahla, Ukungahambisi okanye ukujikeleza, Ukufakwa ngokulula kunye nemibala etyebileyo, ubungakanani obahlukeneyo kunye nemibala ekhoyo
Iimpawu: ukusonga ukuxhathisa ukubola, ukumelana nokuguga, ukudodobala kwelangatye, ukhuseleko, ukuyilwa okunamandla: ubungakanani obuguquguqukayo, ukusika okufanelekileyo, ubungakanani bokuzinza
I-FRP i-grigling yeplastiki eqinisiweyo ubukhulu begrille:
Ubungakanani obuqhelekileyo ngama-25,30,38,40,50 mm, njl., Ungenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi, eziguqukayo kunye ezahlukeneyo, ezilungele ukusika, ubungakanani bokuzinza.
I-FRP uhlobo lomphezulu womhlaba: Uhlobo oluqhelekileyo, uhlobo oluphambili lombala, uhlobo lwe-groove, uhlobo lokubeka isanti-uhlobo olungatyibiliki, uhlobo lwentambo encinci yokupasa encinci, uhlobo lokugquma, uhlobo lwentlabathi, uhlobo lwepultrusion, njl.
1) Amandla aqine aphezulu, ukutyeba okuphantsi- Iglasi yefayibha geogrid yenziwe ngefayibha yeglasi, enokumelana okuphezulu nokuguquka, kunye nobude kwikhefu bungaphantsi kwe-3%.
2) Akukho kukhwela-ixesha elide njengesixhobo sokuqinisa, kubaluleke kakhulu ukubanakho ukumelana ne-deformation phantsi komthwalo wexesha elide, oko kukuthi, ukuxhathisa. Ifayibha yeglasi ayizukuhamba, eqinisekisa ukuba imveliso inokugcina ukusebenza kwexesha elide.
3) uzinzo olushushu-ubushushu obunyibilikayo beglasi yefayibha ingaphezulu kwe-1000 ℃, eqinisekisa uzinzo olushushu lweglasi yefayibha yegalografi ngexesha lokusebenza kwepavumenti.
4) Ukuhambelana nokuxutywa kwe-asphalt-Izinto ezifakwe kwinkqubo yonyango lwasemva kwexesha lwe-fiberglass geogrid yenzelwe umxube we-asphalt, kwaye ifayibha nganye yambathiswe ngokupheleleyo, ehambelana kakhulu ne-asphalt. umxube we-asphalt kumaleko we-asphalt, kodwa uya kudityaniswa ngokuqinileyo.
5) Ukuzinza ngokwasemzimbeni nangokwamachiza-Emva kokutyabeka ngearhente yonyango yasemva kwonyango, iglasi yefayibha geogrid inokumelana nazo zonke iintlobo zokukrala komzimba kunye nokhukuliseko lweekhemikhali, kunye nokuxhathisa ukhukuliseko lwebhayoloji kunye notshintsho lwemozulu, ukuqinisekisa ukusebenza kwayo akuchaphazeleka.
6) Ukungenelela ngokudibeneyo kunye nokuthintelwa – Ngenxa yokuba i-fiberglass geogrid sisakhiwo semigca, izinto ezikwikhonkrithi ye-asphalt zinokungena kuyo, ngaloo ndlela zenze ukuhlangana okungumatshini. Esi sithintelo sithintela ukuhamba kwamanqaku, ukuze umxube we-asphalt ukwazi ukufikelela kwisimo esingcono sokuxinana, amandla aphezulu okuphatha umthwalo, ukusebenza okungcono kokudlulisa umthwalo kunye nokuncipha okuncinci phantsi komthwalo.
Egqithileyo GRP Pultruded Fibreglass Fom Ulwakhiwo fiberglass Tube Ulwakhiwo zu nothango Pultrusion Icandelo / iProfayili
Okulandelayo: Ipropathi edibeneyo ye-FRP yeFiberglass I-Beam
Izinto Zokwakha u-U Channel weNsimbi kwiPr ...
Ubunjani High zu Angle / The Glass Fibre Angle / S ...
Zu Bonai rhanga-fiberglass Sheet Factory G ...